Tag: muuqaal mobile
Waxaa jirtay waqti aan ahaa qof ka sheekeeya barnaamijyada moobiilka. Waxaan u maleynayay inay tahay inaan sugno illaa HTML5 iyo daalacashada moobiillada halkan iyo barnaamijyadu ay si fudud u baabi'i doonaan habka software-ka desktop. Laakiin ma aysan helin. Codsigeena moobiilka ee u gaarka ah khabiirada khibrada isticmaala ee Postano ayaa gebi ahaanba baabi'iyay aragtidaydii hore. Waa tan tirooyinkeena moobiilka ee loo maro Webtrends. Hal fiiri tirakoobka dalabkeena iyo asaga